Sidee Aynu Ku Gaarnay 100,000 Oo Aragti Bileed | Martech Zone
Dadka qaar waxay u maleynayaan in weerarka baloogyada iyo baraha bulshada ay adkeyneyso in codkaaga la maqlo. In kasta oo ay run tahay in buuqu aad u badan yahay, haddana fursadda ah in codkaaga ama codka shirkaddaada laga maqlo baraha bulshada weli suurtagal maahan oo keliya, way fiicantahay haddii aad leedahay waxyaabo ay dadku raadinayaan.
Waxaan dhaafiay 100,000 oo muuqaal ah bishii Nofeembar on Martech, waa rikoodh marwalba oo noo geeya qayb caan ah oo ka mid ah baloogyada suuqgeynta ee hela in ka badan 1 milyan oo booqdayaal ah sanadkiiba. (Xusuusin: shaxanka hoose ma ahan mid raadraacaya waqtiga oo dhan… kaliya laga soo bilaabo markii aan bilownay isticmaalka Xogta WordPress)
Marka sideen ku qabanay? Waxaan dadka usheegayay xirfadayda oo dhan (xitaa kahor internetka) furaha suuq geyn weyn ayaa ah in la isticmaalo dhexdhexaadiyaal badan si kor loogu qaado badeecadaada ama adeeggaaga. Lacagtaada oo dhan kuma shubi kartid hal meel oo dhexdhexaad ah… Kaliya kuma koobnaan kartid dhagaystayaasha, laakiin sidoo kale waxaad si aad ah u xaddideysaa qaababka codkaaga lagu maqlayo. Muddo 5 sano ah, Martech wuxuu ahaa baloog ku saleysan qoraalka. Ma aanan haysan ilo ama waqti aan ku isticmaalo aaladda kale, sidaa darteed waxaan u shaqeeyay sidii aan u tayayn lahaa aaladdaas.
Sanadkan; hase yeeshe, aad ayuu uga duwanaaday. Waa kuwan dhammaan dadaallada kala duwan ee aan ka shaqeynay:
Sanadkii la soo dhaafay waxaan duubnay a show idaacadeed todobaadle ah (fasax maanta darteed fasaxa Mareykanka darteed). Waxaan haysanay usbuuc kadib usbuuc kadib inaan lahadalno maskaxda suuqgeynta ugu weeyn ee warshadaha iyo bandhiga ayaa koray - kumanaan dhagaystayaal ah bil kasta.
Waxaan kudarnay an email marketing barnaamijka sii waday inuu dib ugu celiyo booqdayaasha barta. Tani hadda waa dib loo shaqeynayaa markii aan u haajirno shirkadeena cusub, Delivra, laakiin waxay ahayd xeelad aad u weyn. Haddii balooggaagu aanu lahayn barnaamij emayl, bilow maanta! Waxaan ka shaqeyneynaa qaar ka mid ah qalabka loogu talagalay isticmaaleyaasha WordPress ee aaggaas… naga sii baar annaga!
Horumarkeenna, Stephen, wuxuu ka shaqeeyay dhowr plugins - oo ay ku jiraan kuwa Qalabka widget-ka ee Youtube, oo kasbaday dareen badan bulshada WordPress.
Oo ay weheliso ballansashada barnaamijkeena raadiyaha, Jenn wuxuu ahaa mid aan kala joogsi lahayn oo ku mashquulsan shabakadaheena Twitter, Facebook iyo LinkedIn iyo taraafikada bulshada ayaa qarxay, badanaa dhaafiyey taraafikadayada raadinta bil kasta! Hadda waxaan isticmaaleynaa Kaydka si looga caawiyo nidaaminta iyo joogtaynta wada sheekaysigaas khadka tooska ah.
Goobaha calaamadeynta bulshada iyo goobaha wax lagu ogaado sida StumbleUpon ayaa noo soo diray taangi taraafiko ah, sidaa darteed ku darista badhannada wadaagista bulshada ee boosteejo kasta si ay ugu fududaato dadka waaweyni inay la wadaagaan waxyaabahayaga shabakaddooda waxay ahayd xeelad weyn oo lagu kaxeeyo taraafikada cusub.
Waxaan si firfircoon kor ugu qaadnaa goobta, sidoo kale, leh miisaaniyadaha xayeysiinta yar on Facebook iyo LinkedIn dhagaystayaal aad u gaar ah. Ma hubo in wax badan oo ka mid ah dib-u-soo-celinta maalgashiga halkaa ay ka jiraan, laakiin waa ka-hawlgal sumcad wanaagsan in Martech maskaxda lagu hayo iyadoo lala beegsanayo dhagaystayaasheena CMOs iyo agaasimayaasha Suuqgeynta
Waxaan ku darnay codbixinno si firfircoon si aan ula xiriirno akhristayaashayada Zoomerang wuxuu ahaa kafaala qaali ah runtiina wuxuu naga caawiyay inaan soo qabano xiisaha iyo aragtida booqdeyaasha, iyagoo na siinaya fikrado dheeraad ah oo nuxur leh toddobaad kasta. Xisaabta aasaasiga ah ee Zoomerang waa lacag la'aan, markaa waxaan ku dhiirrigelinayaa qof walba inuu isticmaalo! Hal erey oo taxaddar ah ayaa laga yaabaa inaadan ka helin jawaab aad u badan ra'yi dhiibashadaada. In kasta oo dadku jecel yihiin inay akhriyaan baloogyada, had iyo jeer kama qayb galaan.
Waan horumarinay Macluumaadka Suuqgeynta labada Delivera (Fasaxyada Emailka Ku Dhaqanka Ugu Fiican) iyo Zoomerang (Macaamiisha iyo SMB Natiijooyinka Sahanka Warbaahinta Bulshada) oo la sii daayay iyaga Martech Zone iyada oo qayb ka ah xirmooyinkayada kafaala-qaadka ee aan la leenahay shirkadaha. Infographics waxay si fudud ufiican tahay gaaritaanka dhagaystayaasha haddii aad taqaanid sida loo sameeyo marsiin iyaga!
Waxaan u guurnay blog-ka xaalad farshaxan Shabakada martigelinta WordPress, WPEngine oo lagu daray a Network Delivery Content ku shaqeeya By StackPath CDN, CDN aad uga dhakhso badan Amazon.
Saameyntii ugu dambeysay uguna weyneyd: asal ah, qiimo leh! Inkasta oo inta kale ee suuqgeynta suuqgeynta iyo tiknoolajiyada ay rabaan inay ka dagaallamaan sheekada cusub - ama ka sii xun - dib u habeyn iyada, waxaan si joogto ah uga shaqeynaa sidii loo hubin lahaa inaad heshay macluumaad qiimo leh, togan, waxqabad leh ee warshadaha.
Maxaa ku xiga? Our hay'adda waxay bilaabaysaa manhajyo waxbarasho qaar kamida Jaamacado iyo shirkado waawayn. Waxaan uga shaqeyn doonnaa casharadaas Webinars iyo koorsooyin tababar oo loogu talagalay akhristayaashayada. Tani waxay noo oggolaan doontaa inaan ka gudubno wadahadalka oo runtii aan hoos u dhigno oo aan ku helno natiijooyin wanaagsan. Ka taxaddar fiidiyowyada dheeraadka ah, websaydhyada iyo ebook-yada jidkaaga imanaya!
Shalay waxay ahayd halkan Mahadnaq halkan oo Mareykanka ah waana ku faraxsanahay dhammaan taageerada aad na siisay! Mahadsanid!
Tags: 100000aragti blogaragtida boggaviews
Nov 27, 2011 at 6: 30 AM
Cajiib! Waad layaab badan tahay! Sideen jeclaan lahaa inaan helo ugu yaraan kalabar dadka ku soo booqda. Waxaan isku dayi doonaa qaar ka mid ah talooyinkaaga iyo taladaada.